• I-Tarot yeeNgelosi, iiNgcwele kunye neeFairies SIMAHLA | Ikhadi liqhuba 2019
El Iingelosi zeTarot Iya kukunceda kula maxesha anzima obomi bakho xa uziva ukuba ubomi abunanjongo. Ndikucebisa ngamandla ukuba ugxile kolu hlobo lwetarot, kuba luyakukunceda ngokomoya abagcini kunye nabakhuseli beTarot Los Angeles ukuze ufune ukuziva ngathi uyaphila kwakhona.
Unako Buza iingelosi amathandabuzo anzulu obukho bakho kwaye akuvumeli ukuba ulale. La thetha nomlomo isimahla kwaye ikwi-Intanethi, nangona ukuba ufuna ukubonisana nomntu ngakumbi sinokuthetha ngaye tarot yomnxeba ukukunika elona cebiso lililo. Ukunxibelelana nabo kulula, ndiza kukufundisa indlela yokwenza.
1 Ukusasazeka kwekhadi eLos Angeles
1.1 Ingelosi yangoku
1.2 Ingelosi yexesha elidlulileyo
1.3 Ingelosi yexesha elizayo
2 Amakhadi e-Fairy kunye neengelosi
3 Uluhlu lweengelosi ezinkulu kunye nokutolika kwazo kwiTarot
3.18 Camael okanye Chamuel
4 Uluhlu lwamakhadi eentsomi kunye nokutolika kwawo
4.1 Iintsomi zikaMalekin
5 I-Oracle yeengelosi zokuKhanya kwiTarot
Ukufota kwe Amakhadi eTarot Yeengelosi
Khawuleza ufumane amakhadi e-tarot kwi-intanethi yeengelosi. Uya kwazi ukuba zeziphi iingelosi ezingabagcini ezikukhusela kwimihla yakho, uya kuthi ekugqibeleni ufumanise ukuba ngubani umkhuseli wakho kobu bomi. NgeTarot yeengelosi ezinkulu uya kuyazi ukuba yeyiphi na ingcwele onayo kwixa elidlulileyo, ngoku nakwixesha elizayo. Uya kukhanyisa ubomi bakho ngokuphosa umgangatho ukuze ukwazi intsingiselo yengelosi.
Oku kuya kubonakala ngomlomo emva kokukhetha onke amakhadi ama-6. Uyakumazi ukuba ngubani lo mmeli, umthunywa kaThixo obe ecaleni kwakho oko wazalwa.
El Ingelosi yangoku Nguye okukhokelayo kwindlela yesiphelo sakho yonke imihla. Xa ujikisa unobumba phezu kwetafile uyakuba nempendulo eqinisekileyo evela kule ngelosi.
Ingelosi yexesha elidlulileyo
Nguye Umoya Wasezulwini wexesha elidlulileyo, uya kukukhumbuza Iziganeko ezenzeke ngaphambili ebomini bakho. Kwaye kuyakwenza ukuba ubonakale ezo nkumbulo zaziphawulwe emphefumlweni wakho kumava amadala kwaye awazi, ukuze uziphilise.
Ingelosi yexesha elizayo
Nge Ingelosi enkulu yexesha elizayo uya kufumanisa i Ingelosi ekhuselekileyo eya kukukhusela kwikamva lakho ngokungenammiselo. Iya kukhokela amanyathelo akho kweyona ndlela ilungileyo kuwe. Mthembe kwaye ulandele ingcebiso yakhe ukuze ube nobomi ngokuvisisana ngokupheleleyo, usempilweni kunye noxolo.
Amakhadi e-Fairy kunye neengelosi
Kuya kufuneka uyazi kakade loo nto Iingelosi kunye neefiries ziya kuhlala zinomyalezo kuwe ukuba awazi ukuba uyokudlala nini amakhadi. Uyakuva ukuba unxibelelwano ngephanyazo ongazi ukuba uchaze njani, ngokungathi ukukhanya kwangaphandle kungena ngaphakathi. Khokelwa yintsholongwane yakho ukufumana imiyalezo abafuna ukukunika yona.
Uluhlu lweengelosi ezinkulu kunye nokutolika kwazo kwiTarot
Apha ngezantsi siza kukubonisa nganye yeeNgelosi eziKhulu oza kuzifumana kwifayile ye- amakhadi e-tarotSikwacebisa ukuba udibane ne- uthando tarot, i I-tarot yemali, i I-gypsy tarot, i Tarot ujongilanga kunye Imithandazo eya kwi-Saintyprian yaseCyprian.
Unguye UThixo sisikhumbuzo sam, Ungawubongoza xa uthandaza, kwaye uya kukunika Ukubonakalisa nokuzola ufuna ntoni
Unguye UThixo uyandikhanyisela, ukufikelela kwayo kukusebenzisa ukucenga nokuthandaza.
Unguye Ingelosi ye Ubulungisa, kwindalo iphela ngulo unayo inkumbulo enkulu akukho nto ilibalekileyo.
Uyaziwa ngokuba Ingelosi uBinael, kwaye yile yokucamngca kwezithixo ngenxa yomthandazo wemihla ngemihla.
Ibonakalisa ubuzalwana nobuzalwana. Iyafumaneka ngomthandazo.
Umgcini weemfihlo kukuthenjwa. Umyalezo wakho ngu ukuthembeka nokunyaniseka. Ukugqibelela kulwalamano lothando.
Ukuba le ngelosi ibonakala kuwe, oko kuthetha ukuba wena ubuhlobo ugqibelele.
URafael yiNgelosi eyintloko ephetheyo ukumela ukuphilisa ngoThixo. Ukuba le ngelosi ibonakala kuwe, inxulumene nothando kunye nezifo. Yibize yonke imihla.
Eyaziwa ngokuba ngu-El umgcini wokucaca.
Ingelosi ibonakalise ukuba wayenguThixo. Yibane uthando olungenamiqathango.
ObuThixo buhle kakhulu. Yibize ngomthandazo.
UJeremiel yingelosi ka UThixo unenceba emsulwa. I-alturismo efanelekileyo.
Iintsingiselo ezahlukeneyo. Lowo kwizityalo zetrone kaThixo nalowo wabelana ngesithsaba sakhe.
Intsingiselo yayo yile: ukuzisola okuvela kuThixo nokudumisa uThixo.
Unguye Ubabalo lukathixo. Uvuyo olusulungekileyo olungcwele.
UGabriel ngowona mgangatho uphezulu, kuba intsingiselo yawo yile Amandla kaThixo.
Intsingiselo yayo kukuba into iyayeka, oko kukuthi, i-alegrías ivaliwe.
Camael okanye Chamuel
Le ngelosi ifuna ukugqibelela.
UAzrael ngu Ingelosi ye ukufaLowo unceda uThixo.
UThixo unesisa. Umfundi kaThixo.
Eli khadi lelinye lezinto ezilindeleke kakhulu. Imele amandla, njenge Ingonyama kaThixo.
Umfuziselo otshisa ezandleni zikaThixo, ukwabizwa njalo lowo uvuthayo.
Uluhlu lwamakhadi eentsomi kunye nokutolika kwawo
Eli khadi likuxelela ukuba unothando olupheleleyo kuyo yonke into el mundo ufuna ukuba. Ulwalamano olugqibeleleyo lothando.
NgoGiane yonke into intle. Uya kuqikelela ikamva ngempumelelo enkulu kwaye ngokuqinisekileyo.
Uhlambulukile ukulunga nobumnandi, Uya kuba neendlela ezintsha ebomini bakho.
Umlinganiswa onesibindi kunye neshishini.
I-Oracle yeengelosi zokuKhanya kwiTarot
ICos i I-Tarot yeengelosi awuyi kuba nomqondo, Ungacamngci okanye ulungiselele ngengqondo ngaphambi kokuphosa iidesika. Kuba ewekunye neengelosi zakho, zingelosi ezinkulu eziya kuwe ukuphendula ngokomoya.
Ukongeza, umfundi we-tarot okanye imboni iya kuba nguye oya kuthi, ngeengelosi zetarot, akunike ukutolika umyalezo wabo kunye namakhadi owakhethileyo.
Nokuba awunyanzelekanga ukuba uzilungiselele umfundi weTarot ukuba kufuneka enengqondo elungileyo ukufezekisa ukufundwa ngokuchanekileyo kwe- iingelosi zengelosi. Iziphumo ziya kuba ngokwanelisayo kwaye uya kuyiphendula yonke imibuzo.
Enkosi kwi AbaKhuseli baseZulwini baNgaphaya sele Iingelosi eziLondolozayoEnkosi kunxibelelwano olwenziwe nge-tarot, baya kukulandela ubomi bakho bonke.